holiday Archives | တစ်ဦးကရထား Save
ကျနော်တို့စာရင်းနေကြတယ်5ရုံပွဲလမ်းသဘင်ရာသီအားလပ်ရက်များအတွက်အချိန်အတွက်ဥရောပ၌အလှဆုံးသစ်တောများ! ခရီးသွားများအတွက်နှစ်သက်စရာအကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်သည်သဲသောင်ပြင်ဖြစ်သည်. သို့သော်ဥရောပစူးစမ်းဖို့ကမ်းထက်လမ်းကပိုရှိပါတယ်. ငါတို့နှင့် ပတ်သတ်၍ ငါတို့နှင့်ပူးပေါင်းပါ…
ရထားများအတွက်လေယာဉ်မြောင်းနှင့်တစ်ဦး Weekend Wonder များအတွက်ဥရောပခရီး. အဘယ်သူမျှမကဆက်ပြောသည်အခကြေးငွေနှင့်အတူမိနစ်အတွင်းစာအုပ်ဆိုင်ရန်လွယ်ကူစေသည်တစ်ဦးကရထား Save, ဒါကြောင့်သင်လှုပ်ရှားမှုများပေါ်တွင်သင်၏ငွေစုခံစားနိုငျ! Here are our choices for the Best Destinations in Europe…
တောင်အာဖရိကစိတ်လှုပ်ရှားတစ်ပြည်, မတူကွဲပြားမှု, နှင့်ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရေးပါမှု. ထိုသို့အနီးကပ်မှခန့်မှန်း 17 သန်းဧည့်သည်တောင်အာဖရိကမှတစ်ဦးတည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကခရီးထွက်, နှင့်ဤအရှိဆုံးဖွယ်ရှိဒီနှစ်ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်. It’saplace of beautiful…
သေးငယ်တဲ့တိုင်းပြည်အဘို့, ဘယ်လ်ဂျီယံကြည့်ဖို့များစွာသောအံ့သြစရာမျက်မှောက်နှင့်အတူလက်ရာမြောက်သောရထားခရီးစဉ်များ၏၎င်း၏မျှတသောဝေစုရှိပါတယ်. အဆိုပါဘယ်လ်ဂျီယံကမ်းခြေနေရောင်ခြည်အနားယူနှင့်ပျော်မွေ့နေတဲ့ကြီးမြတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့် 65 ကမ်းရိုးတန်းကီလိုမီတာ, there are many exciting seaside activities to…